Maxaa ka dhalan kara haddi Aqalka hoose uu xilka ka qaado RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa ka dhalan kara haddi Aqalka hoose uu xilka ka qaado RW Rooble
Maxaa dhici kara haddi Farmaajo isku fasaxo Aqalka hoose oo aan heysan kooram buuxa ahna koox isaga taabacsan iyo RW Maxamed Xuseen Rooble, si ay xilka kaga qaadaan kulanka Sabtiga kadib?.
MUDISHO, Soomaaliya - Waa jira shaki xooggan oo laga qabo in Golaha Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya, ay xilka ka xayuubiyaan Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, sidii ay sameeyeen July 25, 2020, markaas oo si deg deg ah jagada looga tuuray RW Xasan Cali Kheyre.
Sida ay ogtahay Keydmedia Online, Golaha Sharci dajinta ayaa u kala jabay laba garab, kuwa taabacsan Madaxtooyada oo ay hoggaamiyaan guddoonka Aqalka iyo kuwa Mucaarad ah oo ka tirsan Xisbiyada waweyn ee dalka ka jira, waxaana tan iyo markii uu dhamaaday waqtigii sharciga ahaa ee Golha 27 December 2020, xarunta Baarlamaanka ka arriminayay xubnaha muxaafidka ah ee Farmaajo taageera.
Falanqeeyayaasha siyaasadda oo ka duulaya waddadii loo maray xilk ka qaadistii RW Kheyre, iyo muddo kordhintii loo sameeyay hay’adaha Dowladda, waxa ay rumeysan yihiin in mar kale Guddoonka Aqalka hoose uu sameyn karo wax ay ugu yeereen is miidaamin siyaasaded taas oo ah in ay jagada ka raacdeeyaan RW Rooble.
Hadaba Maxaa dhici kara haddi Farmaajo isku fasaxo Aqalka hoose oo aan heysan kooram buuxa ahna koox isaga taabacsan iyo RW Maxamed Xuseen Rooble si ay xilka kaga qaadaan?.
Waxaa dib u qarxi kara dagaallo curtay billowgii todobaadkaan, hakadse galay kadib is badel siyaasadeed oo ay sameeyeen Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Waxaa gabi ahaanba burburi doona wada hadallo la filayay in ay dhawaan billowdaan kuwaas oo mucaaradka iyo Maamulladu qorsheeyeen inuu gar-wadeyn ka noqdo Rooble.
Waxaa soo deg degi doonta cunaqabaten ka dhan ah shaqsiyaad ay ugu horreyaan Farmaajo iyo Maxamed Mursal oo ka imaaneysa waddamada reer Galbeedka.
Muqdisho ayaa kala xirmi doonta, waxaana barakici doona boqolaal kun oo qoys oo dad dan yar ah u badan.
Saraakiisha Hoggaamineysa ciidanka la baxay magaca Badbaadada Qaranka, ee diiddan muddo kordhinta ayaa si cad uga biya diiday in ay dib ugu laabtaan xarumahoodi, waxayna sheegeen in aysan banney doonin fariisimahooda cusub inta uu Farmaajo ka baxayo Madaxtooyada.
Wax garadka Soomaaliyeed ayaa Farmaajo, kula talinaya inuu Maamulka doorashada ku wareejiyo Ra’iisul Wasaaraha, kuna ekaado Musharxnimadiisa, si dalku uga badbaado dagaallo sokeeye oo lagu riiqmo.
Guddoonka Golha Shacabka ayaa sidoo kale loogu baaqay in aysan dalka galin xiisad cusub, waxaana la xasuusiyay in dhibkii dhawaan dhacay ay iyagu masuul ka ahaayeen maadaama ay kordhiyeen muddadii Madaxweynaha.